Fantaro i Marisol Mena Antezana, mpampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas ny 13 ka hatramin’ny 19 Mey · Global Voices teny Malagasy
Fantaro i Marisol Mena Antezana, mpampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas ny 13 ka hatramin'ny 19 Mey
Fantaro bebe kokoa ny momba i Marisol Mena Antezana.
Voadika ny 21 Oktobra 2019 19:08 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , English, Español
Ho an'ny taona 2019, nanasa olona maromaro mba hampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas izahay, mba hizara ny zavatra niainan-dry zareo ho fanomezana aina vao sy ho fampiroboroboana ny tenin-drazany. Ao anatin'ity lahatsoratra fanolorana ity, fantaro bebe kokoa ny momba an'i Marisol Mena Antezana (@chaskakanchariq) sy izay vinavinany horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Marisol Mena Antezana no anarako, teratany ao Pampallacta, avy ao Aymaraes, Apurimac, ao Però aho. Izaho dia:
mpanabe mampiray kolontsaina ary mampiasa teny roa
mpampifandray mampiasa teny roa dia ny Quechua – Espaniola
mpikatroka mafana fo ho an'ny teny Quechua amin'ny alàlan'ny Quechua memes sy ny Sentimiento Quechua
Mifantoka amin'ny fanamafisana ny teny Quechua amin'ny sehatra maro samy hafa ny asa fampifandraisako kolontsaina, miaraka amin'ireo asa soratra sy ny hatsikana, ireo fandinihana ary ireo tononkalo, manohana ireo ezaka hanaparitahana ilay teny ao amin'ny media.
RV: Ny toerana misy ny fiteninareo amin'izao fotoana izao, ao anaty sy ivelan'ny aterineto?
Amin'izao, miaraka amin'ny fanohanan'ny media, nisy fifantohana nasionaly sy iraisam-pirenena tamin'ny teniko, ary maro ireo mpikatroka mafana fo miresaka momba ireo olana samy hafa mifandray amin'io teny io. Fa ivelan'ny aterineto, mbola maro ny asa tsy maintsy hatao, mampianatra ny taranaka aty aoriana ny momba io lova io, na dia mbola marefo aza izany. Ilaina izany ho anà ezaka mivaingana mba hahazoana antoka fa tsy ho fatin'ny taona mandeha io teny io
Mikendry ny hifantoka amin'ny fampahafantarana ny teny aho, miainga amin'ny zavatra tena niainan'ireo mpampiasa azy.
mizara ny traikefa ananan'ny tsirairay amin'ny maha mpikatroka mafana fo azy ao amin'ny media toy ny onjampeo sy ny fahitalavitra.
fandinihana sy fijoroana vavolombelona avy amin'ireo mpiteny sy ny ahafahana mampifandray izany amin'ny fikatrohana mafana fo.
ny fampiasàna ilay teny amin'izao fotoana
Ny hery manosika ahy dia ny hahafahan'ireo taranaka aty aoriana hobeazina amin'ny kolontsainy manokana, mba hahatakarany ny toeran'io eo anivon'ireo kolontsaina hafa. Atosiky ny tenin-dreniko sy ireo mpampiasa azy aho, ary manantena aho fa afaka hisokatra ny masony amin'ny lanjan'ny kolontsainy. Ny nofinofiko dia ny mba hampianarana ny teniko anatin'ireo toeram-panabeazana, ary ny hanangana fantsona TV sy onjampeo amin'ny tenin-dreniko.